YEYINTNGE(CANADA): Monday, March 03
ဆရာတော် အရှင်တိလောကာဘိဝံသ စိန်ရတု ၀ိဇာတ ကုသိုလ်တော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားမှာအမေစု
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/03/2014 1 အကြံပြုခြင်း
ခုလဲ မောင်သွေးချွန် အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက် အလုပ်လုပ်နေသည် လုပ်ပြန်ပြီ။
"မောင်သွေးချွန် ဆိုသော. . . .ထိုပုဂ္ဂိုလ်"
မောင်သီ ပြန်ပြောပြလို့ သိရတာ။
ဘုရားဖူးယာဉ်ပေါ် လူငယ်တွေ ဟေးလားဝါးလားပျော်ရမလား ဆူလို့ဆိုပြီး၊ ပုတီးကြီး မ ပြ၊
"ကျုပ်က အားလုံးအတွက် လုပ်နေတာ. . ."လို့၊ ဒေါသတကြီးအော် သတဲ့။
မောင်သီ က "ကိုသွေး ကျနော့်တော့ ချန်ထားပါ၊ ကျနော့်အတွက် ထည့်မလုပ်ပါနဲ့ "လို့ ထအော်တော့၊
တယောက်တပေါက်နဲ့ တကားလုံး "နေပါ့စေ ဆရာမောင်သွေးချွန် ကျနော်ကျမတို့အတွက် ထည့်မလုပ်ပါနဲ့" လို့ ၀ိုင်းတောင်းပန်ကြရသတဲ့။
သူ့စရိုက် ကိုက ထစ်ခနဲရှိ ပုတီးကြီး လည်ပင်းဆွဲပြီး၊ လက်သီးလက်မောင်းတန်းတတ်ပါလေရဲ့၊
ဒီလို အရေးတွေ မရှိခင်သေးကတည်းက ကျနော့်ရဲ့ " တရံရောအခါ . . .ဂင်္ဂါ" ကို ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်
ဝေဖန်တယ်။ ချိုတူးဇော် ဆိုတာ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုး ကို တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့သူ တဲ့။
နောက်နေ့ ကျနော်က လက်ဘက်ရည်သောက်ဖို့ သွားခေါ်တော့၊ မျက်နှာ အိုးတိုးအန်းတန်းနဲ့ လိုက်လာတယ်။
၃၉ လမ်းထိတ်က လဘက်ရည်ဆိုင်လေးမှာ အတူထိုင်ရင်း၊ ခင်ဗျား ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ အဘတွေ
(၀ိဇ္ဇာကြီးတွေ) ကကော နယ်နမိတ်အစည်းအတားရှိသလား၊ ဗုဒ္ဓ ကကော နယ်နမိတ်အစည်းအတား ရှိသလား
လို့ သူ့ကို ခပ်အေးအေးပဲ မေးတော့၊ နဖူး ကို တဖြောင်းဖြောင်းရိုက်ပြီး၊ သေပြီကွာ လို့၊ အော်တယ်။
ထစ်ခနဲရှိ နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ပဲကြည့်၊ ဘာသာရေးသမားလည်းပြောရဲ့၊ ကျယ်ပြန့်တဲ့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ရဲ့ အနှစ် ကို မဆုပ်ကိုင် နဲ့။ တိမ်လွန်းတာ။
ဒီလို ပုတီးလည်ပင်းဆွဲပြီး၊ အဓိဋ္ဌာန်တွေလည်း လုပ်သလား မမေးနဲ့။ စိတ်နှလုံးက သွေးဆူလွန်းတော့၊
"ဆရာသွေး ခင်ဗျားက ဗုဒ္ဓဘာသာတာလီဘန် ပဲ" လို့ ဒီလိုအရေးတွေ မဖြစ်ခင်ကတည်းက ကျနော်က သူ့
ကို ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့တယ်။ တဟဲဟဲ နဲ့။
ပြောရရင် ကျဉ်းမြောင်းလွန်းတာက သူ့ကို လမ်းမှား ပို့လိုက်တယ်။
"ကျနော်ဝေဖန်တာခံရရင် မိတ်ပျက်သွားတာချည်းပဲ၊ ခင်ဗျားတယောက်ပဲ အပြုံးမပျက် ဆက်ဆံတယ်. . ".လို့
ကျနော့်ကို ပြောတော့၊ "ကျနော့် ကိုတော့ ခင်ဗျား ရှုံးသွားတယ် မဟုတ်လား "လို့ ကျနော်မေးခဲ့တယ်။ တဟဲဟဲ နဲ့ ရယ်နေတယ်။
ခုလဲ ကျနော်ကတော့ ခင်မင်ခဲ့သမျှ ကျနော့်မိတ်ဆွေတွေကို ရန်သူ လို့ မမြင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ လူမျိုးရေးအမြင်၊
ဘာသာရေးအမြင်တွေက သူတို့ကိုယ်တွင်းကိန်းအောင်းလို့၊ သူတို့ကို ရန်သတ္တရုပြုနေတာ သူတို့ဖါသာ သိစေ့ချင်လှပါတယ်။
အမျိုးဘာသာသာသနာ အတွက် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ချစ်သော ဆရာသွေးနဲ့ အပေါင်းအပါတို့ကို
ပြည်သူအများက မလုပ်ဖို့ ၀ိုင်းမေတ္တာရပ်ခံ ပေးလိုက်ပါလေ။
မောင်သွေးချွန်တယောက်တော့ " ငတ် ခြင်း " ရဲ့ဒဏ် ကို မခံစားနိုင်တော့လဲ တမင်သိသိကြီး
နဲ့ မရှိတဲ့သိက္ခာ ကို ရိက္ခာ နဲ့ လဲ ပြီး စားသောက်ရတဲ့ဘ၀ကိုရောက်နေပြီကိုးးးးးးးး
သတင်းထောက် စာရေးသူများ လည်း မောင်သွေးချွန် လမ်းစဉ်ကို လိုက်ကြပါလေကုန်...
ဘယ်နှစ်ယောက် နောက်ထပ် ထွက်လာအုန်းမလဲ .. စောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့
မင်းတို့ ပြီးရင် တို့ အလှည့်ကျ မနွဲ့ စတမ်း ပေ့ါ ကိုယ့်လူ ..
မသိနားမလည်ဘဲ ဒေါ်စုမကောင်းကြောင်းတွေ ရေးပါတဲ့ 
အဆဲအဆိုခံရင်း ပွဲကို ညံနေစေရမည်..
ကိုလူမော်တို့က သံကြိုးနဲ့တွဲရင်မလိုက်ဖူးလို့ ငြင်း
ဒါထက်မက ရဲတွေကသံကြိုးနဲ့ပါတွဲချင်တာ ကိုလူမော်တို့က အဲလိုသံကြိုးနဲ့တွဲရင်မလိုက်ဖူး ငြင်းလို့မခတ်တာ။
the photos march 3. Outside the courthouse in Pakokku.Come from the prison to the Court. Many polices follow them. may be ten polices follow.
လာအားပေးသူတွေကို လက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ —
၂၄ ရက်နေ့ ကျမမွေးနေ့မှာ ရုံးထုတ်ကအပြန်။
When he taught to the computer students...
We are discussion together about the online training education.
Whenever I see This kind of pictures I feel really bad.
Proud of you Ma Lwin..Don't give up.
We will win soon.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/03/20140အကြံပြုခြင်း
ဆေးရုံပြိုကျလို့ ဆုံးသွားရှာတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမလေး ရေးခဲ့တဲ့စာလေး
Ma Oo's photo.
ပြည်သူ ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်
ပြည်ထောင်စု ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်
လယ်တွေမြေတွေ သိမ်းနေတဲ့ အချိန်မှာ
ပြည်သူတွေ က အိုးပိုင်၊ အိမ်ပိုင် နေရဖို့ဝေး လို့
ပြည်သူကို အိုးအိမ်နေရာချထားရေး စီမံကိန်းတွေ
Shrithu Aung ဆီမှ
အမျိုးစောင့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းလိုသည် ဆိုရာဝယ်
( ခိုနှုမ်းထုန် )
မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးတွေက ရိုးသားတဲ့ပြည်လူထု (၄ ) သန်းခန့်ကို သွေးဆောင်ဖြားယောင်ပြီး ယင်းတို့၏ လက်မှတ် များ ရယူကာ အမျိုးစောင့် ဥပဒေ (၄) ရပ်ကို ပြဋ္ဌာန်းပေးရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ သမ္မတက တဖန် ပါလီမန်မှာ ဆွေးနွေးမှုများလုပ်ပြီး၊ အဆိုပါ ဥပဒေ (၄) ရပ် ကို ပြဋ္ဌာန်းရန် လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းထံ သဝဏ်လွှာ ပို့ပေးပါတယ်။ တကယ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ သားတွေ တောင့်တခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့် အရေးဆိုတာ ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့တာလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါဘဲ။
ဒီနေရာမှာ ဥပဒေ နံပါတ် (၁) ဖြစ်တဲ့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေဆိုတာ… ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်က နေခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ် သို့ ဟိန္ဒူ ဘာသာ ကူးပြောင်းမယ့် သူတွေအတွက် ရည်ညွှန်း တာလား၊ ယင်း ဘာသာတွေကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကော့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ဘယ်လိုရှိမလဲ။
မြန်မာနိုင်ငံကို ယင်းတို့ပြောနေကျအတိုင်း တသွေးတသံတည်း ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမှ ပြည်သူတွေကို ချမ်းသာခွင့်ပေးမှာဖြစ် ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီဟာ ဒီနိုင်ငံရေးကျားကွက်ထဲမှာ ဆန့်ကျင်ဖက်ရွှေ့မယ်ဆိုရင် အစားခံရလိမ့်မယ်။ ဝိရသူနဲ့ အပေါင်းအပါတွေ အခုကတည်းက ဒေါ်စုကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက် လာနေပြီ။ မနေ့ကစပြီး ရိုဟင်ဂျာများ တကိုယ်တည်း တိုးတိုးတိတ်တိတ် ခံစားလာ ကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက်မှုဒဏ်ကို မကြာခင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ် သူ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး ခံစားရမယ့် နိမိတ်တရပ်အဖြစ် မြင်ယောင်လာမိပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သက်ရှိထင်ရှားစဉ်က ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ထည့်သွင်းရန် ဆွေးနွေးခဲ့ဘူးတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်က ခါးခါး သီးသီး ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ မင်းတို့လုပ်ချင်ရင်လုပ်၊ အဲဒီနိုင်ငံရေးထဲမှာ ငါမပါဘူး…လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ဒီအကြံအစည်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကြောင့် ထိုခေတ်တုန်းက မအောင်မြင်ခဲ့ဟု ပြောရင်တောင်၊ ထိုခေတ်ကတည်းကဗမာနိုင်ငံရေးသမား အတော်များများရဲ့ စိတ်ဓါတ် အတွင်းကိန်းအောင့်နေတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ လူနည်းစုတွေ ဒီမျိုးစောင့် ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်နေကြတယ်ဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်ကို လေးစားတဲ့၊ဗိုလ်ချုပ်ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ မျိုးချစ်ဗမာများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ နားလည်းပေး လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကိုကိုလင်း (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) ( ခိုနှုမ်းထုန် )
သူကြီး သမီး ဇီးသီး
သြော်… ဒေါ်ခင်ကြည်၊ ဒေါ်ခင်ကြည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကို ပြုစုယုယတာတွေ ကျွန်ုပ်တို့ မျက်မြင်မို့ ပို၍ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိသည်။ ဗိုလ်ချုပ်သည် လူထုခေါင်းဆောင်ကြီး၊ဧရာမလူကြီး ဖြစ်သော်လည်း ဒေါ်ခင်ကြည်နှင့်ကျလျှင် ကလေးဆိုးကြီး ဖြစ်သည်။ ဒေါ်ခင်ကြည်ကိုယ်တိုင် ကလေးကို ရေချိုး၊ အဝတ်လဲပေးသည်အထိ ပြုစုယုယသည်ကိုပြောလျှင် ယုံဖွယ်မရှိ။ တကယ်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မြင်ရမှ အံ့သြမိသည်။ ဗိုလ်ချုပ်၏ တသက်တာတွင် ဒေါ်ခင်ကြည်နှင့် နေထိုင်ရသော ရက်များမှာ အပျော်ရွှင် အအေးချမ်းဆုံး ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ဒေါ်ခင်ကြည်သည် ဗိုလ်ချုပ်အား မည်သူမျှ မပေးနိုင်သော စိတ်ချမ်းသာမှုကို ပေးနိုင်ခဲ့လေသည်။
အီဗရာဟင်လင်ကွန်း လုပ်ကြံခံရစဉ်ကဗိုလ်ချုပ်အတွက်ကား အမေရိကန်သမ္မတ အီဗရာဟင်လင်ကွန်း လုပ်ကြံခံရစဉ်က သူ၏ ရဲဘက်တော်တစ်ဦးက ပြောသော စကားနှင့် ကိုက်ညီနေတော့သည်။ ထိုစကားကား “သစ်ပင်ကြီး အတိုင်း အရှည်ကို မြေသို့ ဘုံးဘုံးလဲကျသည့် အခါတွင် ကောင်းစွာသိရသည်”ဟူသောစကားပင် ဖြစ်၏။ဗိုလ်ချုပ်သည်လူထုခေါင်းဆောင်အဖြစ်နှင့် မြင့်မြင့်မားမားကြီး ရပ်တည်နေစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်၏ ဂုဏ်ရည်ကို တင်းပြည့်မခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်း ယခုအခါ လူယုတ်မာတို့၏ လက်ချက်ဖြင့် မြေသို့ ဘုံးဘုံးလဲကျသည့် အခါတွင် ကောင်းစွာသိရလေပြီ။
ဒေါ်ခင်ကြည်သည် ငယ်စဉ်က မြောင်းမြမြို့တွင် သတ္တမတန်းအထိ ပညာသင်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ရန်ကုန်မြို့၊ ကြည်မြင့်တိုင် အေဘီအမ် (အမေရိကန်သာသနာပြုကျောင်း) မိန်းကလေးကျောင်းတွင် ပညာဆည်းပူးခဲ့ပြီးနောက် မော်လမြိုင် မော်တင်လိန်း ဆရာအတတ်သင်ကျောင်းသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် မြောင်းမြမြို့ အမျိုးသားကျောင်း၌ စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆရာမအဖြစ်နှင့် နှစ်အနည်းငယ်ကြာ အမှုထမ်းခဲ့ပြီး မိမိ၏ ဗီဇပါရမီနှင့် ကိုက်ညီသော သူနာပြု ဆရာမအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးနှင့် ဒပ်ဖရင့်ဆေးရုံ (ယခုဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံ) တို့တွင် သူနာပြု ဆရာမသင်တန်းကို တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့သည်။
သူနာပြုသင်တန်းဆင်းပြီး ရှေးဦးစွာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၌ သူနာပြုဆရာမ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့လေသည်။ ထိုစဉ်အတွင်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး (၁၉၃၉-၄၅) ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ၊ကာလကတ္တားသို့လူနာအချို့အား ပြောင်းရွှေ့ပေးသော အဖွဲ့၌ စေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပြီး စစ်ကြီးမဖြစ်မီ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ နောက်ဆုံးသင်္ဘောဖြင့် ပြန်လည်လိုက်ပါလာခဲ့သည်။
ဒေါ်ခင်ကြည်သည် ၁၉၄၂ ခုနှစ် စစ်ကြီးအတွင်း ရန်ကုန်မြို့ ဂေါ်ရာကုန်း ဒိုင်အိုစီဇင် မိန်းကလေး ကျောင်း၌ ဒေါက်တာဘသန်း ဦးဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဆုံး ဆေးရုံကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ဘီဒီအေ ဆေးရုံကြီး၌ အစ်မဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ကြီးနှင့်အတူ သူနာပြုအဖြစ် အစောဆုံး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဂျပန်ခေတ် ဘီဒီအေ ဆေးရုံကြီး (နောင် စစ်ရုံးချုပ်၊ ယခုနိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်) တွင် သူနာပြုချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်လူနာအဖြစ် ဆေးရုံတက်လာသောဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် တွေ့ဆုံမေတ္တာမျှခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၄၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၆ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဂျပန်ခေတ် ဘီဒီအေ ဆေးရုံကြီး အရှေ့ဘက် အစွန်ဆုံး ခန်းမဆောင်တွင် လက်ထပ်ထိမ်းမြှားခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် သားအောင်ဆန်းဦး၊ အောင်ဆန်းလင်းနှင့် သမီး အောင်ဆန်းစုကြည် (ယခု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင်) တို့ ထွန်းကားခဲ့သည်။ ၁၉၄၆ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် သမီးထွေးတစ်ယောက် ထပ်မံထွန်းကားခဲ့သော်လည်း မွေးပြီး ငါးရက်မြောက်နေ့ (စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်) တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့လေသည်။ တဖန် သားလတ် အောင်ဆန်းလင်းမှာ ဗဟန်းမြို့နယ် အမှတ် ၂၅ တာဝါလိန်းလမ်းနေအိမ် (ယခု ဗိုလ်ချုပ် ပြတိုက်) ရှိ ရေကန်တွင် ကစားနေရင်း ဖိနပ်ဆယ်ရာမှ ၁၉၅၃ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ရေနစ်သေဆုံးသွားခဲ့ရ ပြန်သည်။
ဒေါ်ခင်ကြည်သည် လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ ၊ အများအကျိုးနှင့်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်၍ မိခင်နှင့် ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးဝန် (၁၉၄၇-၅၃)၊ လူမှုရေးဝန်ထမ်းကော်မရှင်ဥက္ကဌ(၁၉၅၃-၅၈)၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံလူမှုဝန်ထမ်းကောင်စီဥက္ကဌ ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး ဥက္ကဌ၊ ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကောင်စီဥက္ကဌ၊ကျန်းမာရေးနှင့် ပြည်ရေးပြည်ရာအဖွဲ့ဥက္ကဌ၊ ဒီမိုကရေစီသဘောတရား တိုးတက်ပြန့်ပွားရေးအသင်း ဥက္ကဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီး ကင်းထောက်အသင်း၏ ကင်းထောက်ချုပ်၊ ရာမာခရစ်ရ်ှနာ သာသနာပြုဆေးရုံနှင့် စာကြည့်တိုက် ဒုတိယဥက္ကဌ ၊ မြန်မာနိုင်ငံသူနာတင်ကား တပ်ဖွဲ့တွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး စသည့် လူမှုဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းများကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို မွန်မြတ်သော လုပ်ငန်းအဖြစ် အများက စိတ်ဝင်စား၍ ခံယူလာရန် ရှေးဦးစွာ စည်းရုံးခဲ့သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
ဒေါ်ခင်ကြည်သည် နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြု၍ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး၌ ကျင်းပခဲ့သောကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာခံများသို့လည်း မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်၍ တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ် မေလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ပထစ အစိုးရက ဒေါ်ခင်ကြည်အား အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ယင်းနောက်ဇွန်လတွင်နီပေါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ဒေါ်ခင်ကြည်သည် ယနေ့အချိန်အထိ မြန်မာအမျိုးသမီး လောကတွင် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခံရသည့် တစ်ဦးတည်းသော အမျိုးသမီးကြီးဖြစ်သည်။ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ၇ နှစ်တာဝန်ထမ်းရွက်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင်အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။ အငြိမ်းစား ယူပြီးနောက် မိမိနေအိမ်ခြံထဲက ဥယျာဉ်ကလေးတွင် ပန်းပင်ကလေးများ စိုက်ပျိုးကာ လောကဓံ တရားကို ကြံ့ကြံ့ခံနေထိုင်ခဲ့လေသည်။
ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီများ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အခွန်တိမ်းရှောင်ပါက လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စတင်၍ နှစ်အကန့်အသတ်မရှိ လုပ်ငန်း ပိတ်သိမ်းသည်အထိ အရေးယူမည် ဖြစ်ကြောင်း အခွန်စိစစ် ကြပ်မတ်ကောက်ခံရေး ဘုတ်အဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
အခွန်မဆောင်ပါက တစ်ဖက်သတ် စည်းကြပ်ခြင်းအပြင် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂(က) အရ အခွန်ရှောင်သူကို နှစ်အကန့်အသတ်မရှိ လုပ်ငန်း ပိတ်သိမ်း အရေးယူနိုင်ကြောင်း ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။
“အရင်ကတည်းက အရေးယူဖို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ မလုပ်နိုင်သေးလို့ လာမည့်နှစ်ကစပြီး အရေးယူမယ်” ဟု ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ဝန်ထမ်းကြီးများရုံး ဌာနမှူး ဦးတင်ထွန်းနိုင်က ပြောကြားသည်။
အခွန်တိမ်းရှောင်ခြင်းနှင့် အခွန်ဆောင်ရန် အချိန်ဆွဲခြင်း မဖြစ်စေရန် လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စတင်၍ ကုမ္ပဏီများ၏ နှစ်ချုပ် စာရင်းရှင်းတမ်းများကို စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးသို့ မပို့မီ ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ဝန်ထမ်းကြီးများရုံးသို့ ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းရုံးထံမှ သိရသည်။
ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း အခွန်မဆောင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များကို ခေါ်ယူ တွေ့ဆုံသတိပေးခြင်း၊ အခက်အခဲများ မေးမြန်းခြင်းသာ ပြုလုပ်ကြောင်း ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/03/20142အကြံပြုခြင်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဝန်ကြီးချုပ် Sheikh Hesima တို့ တွေ့ဆုံ
လယ်တီသိမ်ပြောင်းရွှေ့ရေး လတ်တလော မဖြစ်နိုင်သေးဟုဆို
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်ရှိ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီတူးဖော်ရေးစီမံ ကိန်းနယ်မြေ၏ သတ္တုသိုက်ဗဟိုချက်နေရာကျသော လယ်တီသိမ်တော်နှင့် တောင်ကြားစေတီကို လတ် တလော ရွှေ့ပြောင်းရန်မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း ဆည်တည်းရွာဟောင်းကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော်ဦးစန္ဒာ သီရိက မဇ္ဈိမကို မိန့်ကြားသည်။
လယ်တီသိမ်တော်နှင့် တောင်ကြားစေတီ ပြောင်းရွှေ့တော့မည်ဆိုသည့်သတင်းသည် အွန်လိုင်းစာမျက် နှာများတွင် ပျံ့နှံ့ရာ အဆိုပါသတင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အတည်ပြုချက်ရယူနိုင်ရန် ဒေသခံဖြစ်သည့် ဆရာ တော်သို့ မေးမြန်းလျှောက်ထားရာတွင် အထက်ပါအတိုင်း ပြန်လည်မိန့်ကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
သိမ်ဟောင်းနေရာကိုလည်း သံဃာတော်တွေနဲ့ သိမ်နုတ်ကံ ပြုလုပ်ရဦးမယ်။ နောက်ပြီး အသစ်ဆောက် မယ့်နေရာမှာလည်း သိမ်သမုတ်ရဦးမယ်။ အဲဒါကြောင့် လတ်တလောရွှေ့ပြောင်းမယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါ ဘူး”ဟု ဆရာတော်က မိန့်သည်။
အဆိုပါ သိမ်ပြောင်းမည့်အစီအစဉ်ကို ဒေသခံသံဃာတော်များနှင့် ရွာသားများကလည်း မျက်ခြည်မပြတ် စောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်း ဆရာတော်က မိန့်ကြားခဲ့သေးသည်။ ဒေသခံပြည်သူများ၏ ယုံကြည်ချက် များအရ အဆိုပါပြောင်းရွှေ့မည့် လယ်တီခဏ္ဍသိမ်တော်သည် ပထမ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး သီ တင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့သည့် သိမ်တော်ဖြစ်ကြောင်း သမိုင်းအထောက်အထားများကို ကိုးကား၍ ဒေသခံများ က ပြောဆိုထားသည်။
မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်နှင့် တရုတ်ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် လက်ပံ တောင်းတောင် ကြေးနီတူးဖော်ရေးစီမံကိန်း၏ မိုင်းတည်ဆောက်ရေးကဏ္ဍ နှစ်အကန့်အသတ်မှာ ပြည့် လွန်နေပြီး တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍသို့ ရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်ရာ ကြေးနီသတ္တုသိုက်၏ ဗဟိုချက်နေရာ တွင် ကျရောက်နေသော လယ်တီသိမ်တော်နှင့် တောင်ကြားစေတီကို နေရာသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်ရန် ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်က နိုင်ငံတော် သံဃဝန်ဆောင် မဟာသံဃနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဗန်းမော် ဆရာတော် ဦးကုမာရာဘိဝံသနှင့် အဖွဲ့က ထိုဒေသို့ ကြွရောက်တော်မူပြီး သိမ်ပြောင်းရွှေ့ရေး သြဝါဒခံ ယူပွဲတစ်ရပ်ကို ဆားလင်းကြီး ကံဆွယ်ကျောင်းတိုက်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယင်းနေ့က ညနေ ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ်ခန့်တွင် ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီးနှင့်အတူ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဒု-ဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်း၊ တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီး ဦးတင်ဝင်း၊ ရဲမှူးကြီးနေထွန်း၊ ဒု-ရဲမှူးကြီးတင်မိုးအဖွဲ့တို့က အဆိုပါ လယ်တီသိမ်တော်နှင့် တောင်ကြားစေတီအား ဝင်ရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ သေးကြောင်း လက်ပံတောင်းကြေးနီစီမံကိန်း လုံခြုံရေးရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
နိုင်ငံရေးအရဖြစ်စေ၊ ဘာသာရေးအရဖြစ်စေ ဒီကိစ္စ စောနေသေးတယ်လို့ အန်တီတို့က မြင်ပါတယ်။ စုံ စမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် အစီရင်ခံစာ အပိုဒ် ၈၅၊ အပိုဒ်ခွဲ(၆)အရ တင်ပြပေးထားခဲ့ပြီးပြီ။ အခုချိန်မှာ ရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီအချက်နဲ့ မညီဘူးလို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့”ဟု ဥပဒေပညာရှင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပြီး လက်ပံတောင်းတောင် စုံးစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးလည်းဖြစ်သူ ပုလဲမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
လက်ပံတောင်းတောင်ကြား တောရစင်္ကြံကျောင်းခေါ်သောနေရာနှင့် ၎င်းအပေါ်ရှိ စေတီ၊ သိမ်ကျောင်း စသည့် ဗုဒ္ဓသာသနိကအဆောက်အအုံများသည် သတ္တုသိုက်တည်ရှိရာ အဓိကနေရာဖြစ်နေခြင်း၊ သာ သနိကအဆောက်အအုံများကို ကွင်းရှောင်ပြီး ကြေးနီသတ္တု တူးဖော်ထုတ်လုပ်မည်ဆိုလျှင်လည်း ယင်း အဆောက်အအုံများ၏ ကြံ့ခိုင်တည်မြဲမှုကို ဧကန်မုချ ထိခိုက်နိုင်မည်ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် အဆိုပါလက်ပံ တောင်းတောင်ကြား တောရစင်္ကြံကျောင်းမြေနေရာနှင့် ၎င်းအပေါ်ရှိ ဗုဒ္ဓသာသနိကအဆောက်အအုံများ ကို လုံးဝ ထိခိုက်ပျက်စီးစေမှုမရှိဘဲ လက်ရှိအနေအထားများအတိုင်း အခြား သင့်လျော်မည့်နေရာတစ်ခု ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးသင့်ကြောင်း လက်ပံတောင်းတောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ အပိုဒ် ၈၅၊ အ ပိုဒ်ခွဲ(၆)တွင် သုံးသပ်တင်ပြထားသည်။
ယနေ့ 7Day နေ့စဉ်သတင်းစာမျက်နှာဖုံး
ဆရာတော် အရှင်တိလောကာဘိဝံသ စိန်ရတု ၀ိဇာတ ကုသိုလ်တော...
ခုလဲ မောင်သွေးချွန် အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက် အလုပ်လုပ်...
ဆေးရုံပြိုကျလို့ ဆုံးသွားရှာတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမလေးေ...
အခွန်မဆောင်သူ လုပ်ငန်းရှင်များကို လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု...
Democracy သတင်းစာ ဆိုတာ ဒီလိုမျိုး